Puntland oo qaadacday natiijada ka soo baxday shirkii hiigsiga dowladda 2016 ee Muqdisho (Dhegeyso) – Radio Daljir
Seteembar 8, 2013 7:12 b 0
Garoowe, September 8, 2013 – Dowladda Puntland ayaa si buuxda u qaadacday shirkii hiigsiga qorshaha dowladda ee sanadka 2016-ka. ?kaas oo jimcihii ina dhaafay ku soo dhamaaday Muqdisho, isagoo laga soo saaray 5 qodob oo waa weyn.
Wasiirka warfaafinta ee Puntland Axmed Sheikh Jaamac oo maanta shir jaraa?id ku qabtay Garoowe ayaa sheegay in dowladda Puntland ay qaadacday sidii horeyba ay u sheegtay shirkaas, wuxuu intaas ku daray in aysan marnaba macquul ahayn in ay ogolaadaan natiijada shirka.
Axmed Sheikh Jaamac wuxuu nasiib daro ku tilmaamay ka qeyb-galka shirka ee siyaasi horey xilal waa weyn uga soo qabtay Puntalnd Jaamac Cali Jaamac, wasiirka ayaa ku dhaliilay hadalo ka soo yeeray siyaasiga Jaamac cali oo ka hadlay go?aanka Puntland ee shirka khuseeya.
Shirka qorshaha dowladda ee sanadka 2016-ka ayaa waxaa ka qeyb-galay Madaxda dowladda federaalka, siyaasiyiin iyo masuuliyiinta maamulada dalka qaarkood oo lagu casumay, waxaana intiisa badan diirada lagu saaray arrimaha federaalka, Dastuurka iyo doorashooyin dalka ka dhaca.
Puntland ayaa bilowgii shirka waxay qaadacday gebi ahaanba shirkaas, waxaa jira siyaasiyiin kala duwan oo iyagana dhaliilay qaabka loo abaabulay shirka ku soo dhamaaday Muqdisho, Ra?isal wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Geedi ayaa shirka ku sifeeyey mid aan lagu tilmaami karin shirweyne Qaran.
Dhegeyso:- ?Shirka jaraa?id ee uu qabtay wasiirka warfaafinta ee Puntland Axmed Sheikh jaamac
Baahin: Axad, 8- Sep 2013 -Caawa Iyo Daljir Weriye Cabdifataax Cumar Geeddi ~ Daljir ~ Garoowe